चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ सेरेब्रल एन्युरिज्मबाट पीडित, कस्तो हो यो रोग ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ विश्व ∕ चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ सेरेब्रल एन्युरिज्मबाट पीडित, कस्तो हो यो रोग ?
चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ सेरेब्रल एन्युरिज्मबाट पीडित, कस्तो हो यो रोग ?
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७९ वैशाख २८ गते, १२:५७ मा प्रकाशित
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ मानसिक रोगबाट पीडित छन् । मिडिया रिपोर्टहरूमा यो दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति मस्तिष्क रोग ‘सेरेब्रल एन्युरिज्म’बाट पीडित छन् । यति मात्र होइन, यसका कारण उनी २०२१ को अन्त्यसम्म अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो । रिपोर्टका अनुसार सी जिनपिङले यो रोगबाट बच्न शल्यक्रियाकोसट्टा परम्परागत चिनियाँ औषधिबाट उपचार सुरु गरेका छन्।
लामो समयदेखि अड्कलबाजी
चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यलाई लिएर लामो समयदेखि अड्कलबाजी भइरहेको थियो । सी जिनपिङले बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकसम्म विदेशी नेताहरूलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि यी अनुमानहरू थप बलियो भएका थिए। यसअघि सन् २०१९ मा उनको इटाली भ्रमणका क्रममा सी जिनपिङको स्वास्थ्य खराब भएको धेरै सङ्केतहरू थिए।
इटाली र फ्रान्सको भ्रमणका क्रममा उनलाई हिड्न कठिन भएको देखियो । हाल चीन सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक बयान दिएको छैन।
के हो सेरेब्रल एन्यूरिज्म रोग ?
मस्तिष्कको रक्तनली एक छेउबाट कमजोर भएर बेलुन जस्तै फुल्नुलाई सेरेब्रल वा ब्रेन एन्युरिज्म भनिन्छ। यो रोग मस्तिष्कको कुनै पनि भागमा लाग्न सक्छ। रिपोर्टका अनुसार यो रोग उच्च रक्तचाप, आनुवंशिक रूपमा कमजोर नसा, इन्फेक्सन, चोटपटक र मस्तिष्कमा क्षति वा ट्युमरको समस्या भएका मानिसहरूमा बढी पाइन्छ।
यो रोग असामान्य हानि वा मांसपेशी टोनधमनीको ३ तह मध्ये एकको अनुपस्थितिको कारण हुन्छ, धमनीको भित्ता कमजोर र अधिक नाजुक बनाउदै जान्छ। सबै एन्युरिज्म फुट्ने र सानामा सामान्यतया फुट्ने जोखिम कम हुँदैन। एउटै बिरामीमा एकै समयमा एकभन्दा बढी धमनीविस्फार हुन सक्छ।
घाँटी कठोर हुनु,
वाकवाकी लाग्नु र बान्ता हुनु,
आँखा, ढाड वा खुट्टा दुख्नु,
चेतनाको अवस्था बदलिनु।
रक्सी पिउन नहुने,
लागूपदार्थको प्रयोग नगर्ने,
र, रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुहोस्